LLLP - Limited Liability Limited Partnership के हो?
व्यापार सुरु गर्नुहोस्
तपाईंको व्यवसाय व्यवस्थापन गर्नुहोस्
तपाईंको व्यवसाय बढाउनुहोस्
कल एटिमेन्ट 24 /71-888-444-4812
सीमित दायित्व लिमिटेड साझेदारी
व्यापार सुरुवात र व्यक्तिगत सम्पत्ति सुरक्षा सेवा।
LLLP के हो?
LLLP एक सीमित देयता लिमिटेड साझेदारी हो। यहाँ यस संस्थाको दुई ठूला लाभहरू छन्। पहिलो, साझेदारी साझेदारलाई उजागर हुँदा साझेदारहरूलाई दायित्वबाट जोगाउँछ। दोस्रो, यो सम्पत्ति संरक्षण प्रदान गर्दछ। यही हो, जब कसैले साझेदारको रूपमा स्वीकारेको हो, व्यक्तिगत रूपमा, यो साझेदारको निर्णय लेनदेन लिईरहेका साझेदारीको अस्तित्वलाई सुरक्षित गर्दछ। त्यसोभए, चाहे मुकदमा कम्पनी भित्रबाट आउँदछ वा सीधै साझेदारलाई संलग्न गर्दछ, LLLP ले कानूनी बाधा प्रदान गर्न सक्छ।
यो प्रकारको साझेदारीले सीमित दायित्व साझेदारीको सामान्य साझेदारहरूको लागि सीमित दायित्व प्रदान गर्दछ। यो सीमित साझेदारीको विपरीत हो, जहाँ सामान्य साझेदारहरू साझेदारको सबै दायित्वहरूको लागि संयुक्त रूपमा संयुक्त रूपमा जिम्मेदार छन्। सीमित साझेदारी नियम र सीमित साझेदारी सम्झौतामा प्रभावकारी छ। लामो साझेदारी सम्पत्ति संरक्षण कानून कानून को लागि सीमित साझेदारी द्वारा प्रदान गरिएको छ यस संस्थाको लागि कानूनमा निहित सम्पत्ति सुरक्षा प्रदान गर्न प्रयोग गरिन्छ।
एक सीमित दायित्व लिमिटेड साझेदारी स्थापना
अधिकतर राज्यहरूमा एक सीमित साझेदारीले सीमित दायित्व लिमिटेड साझेदारको रूपमा दर्ता गर्न सक्छ। सीमित साझेदारी साझेदारी द्वारा सीमित दायित्व सीमित साझेदारी हुन सक्छ र साझेदारीमा संशोधन हुन सक्छ। प्रायः राज्यहरूमा साझेदारी पहिले नै अवस्थित एक समान कानूनी संस्थाको रूपमा जारी हुनेछ।
यस लेखको रूपमा, सीमित दायित्व लिमिटेड साझेदारता निम्न राजमार्गमा पहिचान गरिएको छ:
धेरै अन्य राज्यहरूले सीमित दायित्व लिमिटेड साझेदारी को पहिचान गर्न थालेका छन। यद्यपि कैलिफोर्नियाले क्यालिफोर्निया एल एल एल एल पीको गठन गर्न अनुमति दिएको एक राज्यको नियम हो, यसले यसलाई अर्को राज्यको कानुन अन्तर्गत एलएलएलपी पहिचान गर्दछ।
सामान्य साझेदारसँग एक निगमको शेयरधारकहरूको समान सीमित दायित्व छ। साझेदारीको फाइदा परिवर्तन गर्दैन जस्तै साझेदार करण जो समावेश गर्न को लागी उपलब्ध छैन। सामान्य पार्टनरको सम्भाव्य दायित्व घटाउँछ।
सीमित साझेदार सम्पत्ति सम्पत्ति कानून "कानुनी कानून" को एक विशाल इतिहास देखाउँछ भनेर प्रमाणित गर्दछ कि एल पी सम्पत्ति सम्पत्ति को संरक्षण गर्दछ जब एल.पी. को मालिकों को मुकदमा गरिन्छ। तथापि, एल.पी. एक कानूनी रूपमा कमजोर छ "सामान्य पार्टनर।" जब व्यवसाय मुकदमा भएको छ भने यो इकाईले एल.पी. नियमहरूमा निहित बलियो सम्पत्ति संरक्षणको साथ र "सामान्य पार्टनर" को स्थिति को लागी दायित्व सुरक्षा प्रदान गर्ने फायदा पनि छ। "LLLP को तर्फबाट।
LLLP को रूप मा केहि गर्न को लागी शामिल छ। विशेष लेख राज्य सरकार संग दायर गरिएको छ। कानूनी समाप्ति निम्नानुसार छन्: सीमित दायित्व लिमिटेड पार्टनरशिप, एल एल एल पी, वा LLLP
यो वेबसाइटमा प्रस्तुत गरिएको जानकारी कवर गरिएको विषयको सन्दर्भमा सही र प्रामाणिक उपयोगी जानकारी र अनुसन्धान समर्थन प्रदान गर्न डिजाइन गरिएको छ। यो बुझ्नु भएको छ कि कम्पनी समावेश गरिएको कानुनी, लेखा, वा अन्य व्यावसायिक सल्लाह प्रतिपादनमा व्यस्त छैन। यदि कानुनी सल्लाह वा अन्य विशेषज्ञ सहयोग चाहिन्छ भने, सक्षम व्यक्ति व्यक्तिको सेवा खोज्न सकिन्छ।
कुक टापु ट्रस्ट
एक विना बनाइने जीवन ट्राइ
नेवाडा सम्पत्ति संरक्षण ट्रस्ट
शेल्फ कम्पनीहरू र LLCहरू
सार्वजनिक शेल कम्पनीहरू
प्रतिलिपि अधिकार © 2019 Companiesinc.com | सर्वाधिकार सुरक्षित